Kedu mmetụta ezigbo batrị lithium dị mma na-enwe na ahịa ọkụ anyanwụ? Ka anyị lee! - Sresky
Kedu mmetụta ezigbo batrị lithium dị mma na-enwe na ahịa ọkụ anyanwụ? Ka anyị lee!
Batrị lithium na oge ọkụ ọkụ anyanwụ
Oge ọkụ nke oriọna anyanwụ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na batrị. Mgbe a na-eji oriọna anyanwụ, a na-atụgharị ike anyanwụ ka ọ bụrụ ike eletrik site na oghere anyanwụ. Na echekwara na batrị maka abalị ọkụ. Batrị dị oke egwu. Batrị acid-acid ejiri na oriọna ọdịnala dị iche na batrị lithium a na-eji n'ọtụtụ oriọna anyanwụ taa.
1. Batrị lithium sitere na nkwụsi ike na nchekwa nchekwa a pụrụ ịdabere na ya nke ihe electrode dị mma. Batrị lithium agaghị agbawa ọbụlagodi na nkuko siri ike, yabụ nchekwa dị elu.
2. Ihe batrị lithium anaghị enwe ihe ọ bụla na-egbu egbu na ihe na-emerụ ahụ, nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi. Enwere nnukwu ọnụọgụ lead na batrị lead-acid, nke ga-emetọ gburugburu ebe obibi ma ọ bụrụ na ewepụghị ya nke ọma.
3. Batrị lithium nwere nnukwu ike ike na ogologo ndụ ọrụ. Njupụta ike na-ezo aka na ọnụọgụ ike echekwara na mpaghara oghere ma ọ bụ oke. Ike njupụta nke batrị lithium n'ozuzu bụ 200 ~ 260wh / g, nke bụ 3 ~ 5 ugboro nke lead-acid. Ka njupụta ike nke batrị na-abawanye, ka enwere ike ịchekwa ọkụ eletrik karịa otu nha ma ọ bụ olu ọ bụla.
4. Batrị lithium pere mpe, dịkwa mfe ibufe.
5. Igwe ọkụ n'okporo ámá nke anyanwụ na-eji batrị lithium dị mfe ịwụnye. Ọ dịghị mkpa idobe olulu batrị, wụnye batrị lithium ozugbo na nkwado. Jiri ụdị nkwudo ma ọ bụ arụnyere n'ime ya.
Batrị lithium na uru ejiri na oriọna SRESKY
Batrị lithium klas A:
1. Street oriọna usoro eji ụgbọ ala ike batrị, elu-okpomọkụ na-eguzogide, ogologo okirikiri ndụ> 2000 ugboro
2. Ogige usoro na-eji eletriki ike batrị, elu-okpomọkụ na-eguzogide, ogologo okirikiri ndụ>1000 ugboro
3. Nkwenye dị mma nke nguzogide n'ime, voltaji na ikike
Nnukwu mmepụta teknụzụ mmepụta ihe, ikike njikwa mma siri ike
SRESKY Ternary Lithium nwere ule dị elu / dị ala karịa ọnwa 3. 1000 ~ 2000 okirikiri. Ogologo ndụ> 3 afọ
Ngwaahịa Sresky nwere ALS na-agbatị teknụzụ oge ọkụ na-akpaghị aka. Ngwaahịa ahụ ka nwere ike ịrụ ọrụ maka ụbọchị 8-10 na igwe ojii na ụbọchị mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkụ anyanwụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị